Raw MT2 (Melanotan-II) Budada (121062-08-6) Soosaarayaasha - Phcoker
Budada Raw MT2 (Melanotan-II) waa budada loo yaqaan 'heptapeptide', oo ah analog alpha-melanotropin (4,10); awood of
Mashiinka MT2 (Melanotan-II) budada (121062-08-6) video
Mashiinka MT2 (Melanotan-II) budada (121062-08-6)
Melanotan II (MT-2) waa peptide isku-darka, analoogga hormoonnada dabiiciga ah ee kor u qaada melanocortin tan (soo-saarka melanin iyada oo loo marayo melanocytes, taas oo go'aamisa oo suuragal ka dhigeysa tan), sidaas darteed yaraynta halista waxyeellada qorraxda iyo kuwa kale waxyeelada waxyeelada leh shucaaca qoraxda iyo solarium.
Peptide-kan MT-2 waxaa loogu talagalay inuu si aad ah u kiciyo jawaabta jirka ee soo-gaadhista shucaaca UV-ga, sababtoo ah soosaarida melanin waa soo-saarista ugu yar ee qorraxda ee loo baahan yahay si loo helo saamaynta ugu badan ee maqaarka. Tani waa xalka ugu fiican ee kuwa maqaarka saafiga ah leh si ay u noqdaan kuwo maqaar leh iyaga oo aan toddobaadyo qorrax ah ku qaadan oo aan u marin habka gubashada iyo bogsashada.
Isticmaalayaasha MT2 waxay la kulmaan hargab dhaqso badan iyo bogsiin deg deg ah unugyada maqaarka ee qoraxda waxyeeleeyay Sababtaas awgeed, melanotan II waxay si gaar ah ugu habboon tahay kuwa maqaarku cirro leeyahay (nooca maqaarka 1 & 2) oo u nugul gubashada qorraxda.
Marka laga hadlayo qiyaasta Melanotan II ， habka caadiga ah ee soo dhoweynta waxay muujineysaa qaadashada hal daawo oo ah duritaanka Melanotan II xaddiga 1 mg (xisaabinta saxda ah ee kiilogaraam looma baahna, maaddaama qiyaasooddu ay si weyn ugu kala duwan yihiin), ka bilow 250mkg maalin iyo maalmo 4 gudahood ku dar 250mkg kale oo tartiib tartiib ah. Maalinta afraad korodhka qiyaasta ilaa 1mg oo ku dhegan heerkaan ilaa tan la doonayo la gaaro. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan iibsashada Melanotan II (MT-2) khadka tooska ah, fadlan ha ka labalabeyn inaad kala hadasho shirkad-noole.
Kalluunka MT2 (Melanotan-II) budada (121062-08-6) Smamnuucista
Product Name Buduun MT2 (Melanotan-II) budada
Magaca Kiimikada Melanotan II; MelanotanII;
isku xigxiga Ac-Nle-cyclo (Asp-His-DPhe-Arg-Trp-Lys) -NH2
Fasalka Daroogada Peptide
Molecular Wsideed 1024.198 g / mol
barafku Psaliid > 181 ° C (subl.)
Fdib u soo celinta Psaliid ≥17.0
Biological Life-Life 33 saac
Application Melanotan II acetate cusbo ayaa loo isticmaalay in lagu baro saameynaha xaddidan ee quudinta iyo kharashka tamarta ee jiirka.
Melanotan II Saliida Acetic Acid, waa kiimiko la sameeyay oo la mid ah hormoon laga helo dadka. Melanotan II ayaa lagu muujiyey inay leedahay melanogenesis (tanning) iyo saameynta aphrodisiac ee bini'aadamka.